Faransiiska iyo QM Oo Qabanaya Shir Qaadhaan loogu Gurayo Beyruut | Gaaroodi News
August 9, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Madaxweynaha Faransiiska oo Beyruut jooga
Qaraxii weynaa ee baabiiyey magaalo madaxda Lubnaan Salaasadii ka dib, ayaa maanta oo Axad ah ay hogaamiyeyaasha dunidu qabanayaan shir ay qaadhaan ugu gurayaan magaalada Bayruut.
Kulankaas oo loo adeegsan doono maqalka iyo muuqaalka internet-ka ayaa waxa qabanqaabiyey Faransiiska iyo Qaramada Midoobay, waxaanu qabsoomi doonaa 2 duhurnimo wakhtiga Lubnaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu ka qayb geli doono shirkaas.
Saraakiishu waxay ku qiyaaseen in qaraxa ka dhashay bakhaar ay yaalleen 2,000 oo tan oo maadada Ammonium Nitrate uu dhaliyey khasaare dhan 15 bilyan oo dollar.
Qaraxaas waxa ku naf waayey ugu yaraan 158 qof 5,000 oo qofna way ku dhaawacmeen halka 300,000 oo kalena ay ku guryo beeleen.
Sabtidii ayaa dhawr kun oo qof iskugu soo baxeen dariiqyada magaalada oo ay booliska oo u adeegsadaday suntan dadka ka ilmaysiisa ay isku dhaceen mudaharaadayaashuna ay shiid hadhka kaga dhigeen booliska. Waxaanay dadkii mudaharaadayey galeen oo qabsadeen xarumo wasaaradeed.
Ra’isal wasaaraha Lubnaan, Xasan Diyaab, ayaa khudbad uu Telefishanka ka jeediyey ku sheegay in uu dalban doono in dalka laga qabto doorashooyin wakhtigoodii ka soo hor mara si xal loogu helo xiisadda taagan. Arintaas ayaa lagaga wadahadli doonaa shirka golaha wasiirada ee Isniinta dhici doona.
Qaraxa ka hor, Lubnaan waxa marka horeba ka taagnaa dhibaatooyin dhaqaale waxaanu sidoo kale dalku la tacaalayey wax ka qabashada safmarka korona.
Mudaharaaddo dawladda lagaga soo horjeedo ayaa bilaabmay bishii Oktoobar ee kal hore, waxaana sabab u ahaa duruufta maaliyadeed ee dalka ka jirtay iyo hoos u dhaca lacagta dalkaas.
Maxaa dhacaya Axadda?
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa booqasho ku tagay magaalada Bayruut Khamiistii, waxaanu sheegay in uu doonayo inuu gargaar caalami ah dalka u codsado.
Warbixin ka soo baxday qasriga madaxtooyada Faransiiska ayaa lagu sheegtay in shirka Axadda “ujeedadiisu tahay in ay dhaqaale ku yaboohaaan saaxiibada Lubnaan ee caalamku iyo sidoo kale in la isku keeno taageero degdeg ah oo beesha caalamku bixiso”.
Wakiilo ka socda dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub, Shiinaha, Ruushka, Masar, Urdun iyo Ingiriiska ayaa shirkaa ka qayb geli doona, waxaana jira dalal badan oo kale oo lagu marqi qaaday.
Qoraallo xidhiidh ahaa oo Madaxweyne Trump ku baahiyey barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayuu ku sheegay in uu kala hadlay “masiibadaa ka dhacday” Bayruut Madaxweyne Macron oo uu khadka telefoonka kula hadlay, waxaanu intaa ku daray inuu qudhiisu ka qayb geli doono shirkaa.
“Dal weliba diyaar buu u yahay inuu caawimo falo” ayuu yidhi.
Dhawr dal ayaa durba ku yaboobay malaayiin doolar oo gargaar ah waxaanay direen maraakiiba sida agab kaalmo ay iyo dhakhaatiir caawiya dadka reer Bayruut.
Laakiin hay’adaha Qaramada Midoobaya ayaa ku baaqay kaalmo dheeraad ah waxaanay digniin ku bixiyeen in caqabado waaweyni dalka soo foodsaareen. Guryo badan ayaa biyaha iyo laydhkuba ka go’anyihiin waxaana jira walaac isa soo taraya oo laga qabo in cunadu gabaabsi noqoto, iyada oo fiditaanka cudurka Covid-19 aad u sii kordhayso dalka oo dhan oo isbitaallada qudhoodii culays aad u badani fuulay.
“Baahi degdeg ah ayaa jirta oo weliba aad u ba’an” ayey tidhi af-hayeenka Unicef, Marixie Mercado oo warfidiyeenka kula hadlashay magaaalda Geneva Jimcihii.